Kolontsaina sy fanatanjahantena : Raikitra ny fifaninanana « Hazakazaka posiposy » -
AccueilVaovao SamihafaKolontsaina sy fanatanjahantena : Raikitra ny fifaninanana « Hazakazaka posiposy »
Ao anatin’ny fanomezan-danja ny asa fitarihana posy izay sady kolontsaina no mampiavaka an’i Madagasikara amin’ny firenena hafa, raikitra ny fifaninanana « hazakazaka posiposy », izay handraisan’ireo mpitarika posy anjara amin’ny kaominin’Ambatolampy, Ambositra ary Antsirabe. « Hazakazaka posiposy Mampiray 2017 », no anarana hisaloran’ny hetsika hiarahan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena noho izy hiarahana mikarakara amin’ny fikambanana Mampiray. « Tanjona amin’ny hetsika ihany koa ny fampifandraisana ireo mpitarika posy rehetra isam-paritra, mba hampivoarana ny asan’izy ireo », araka ny fanamarihan-dRajery, anisan’ireo mpikarakara raha nanazava ny hetsika tetsy amin’ny Culina Ivato. Raha ny tarehimarika natolotry ny mpikarakara dia manodidina ny 1000 ny isan’ny mpitarika posy any amin’ireo kaominina ireo, ka saika tantsaha manampy ny vola miditra azony amin’ny fambolena sy ny fiompiana ny ankamaroan’izy ireo.
Ny tanànan’ Ambatolampy no hisantarana ny fifaninanana ny 01 Avrily, ary ny 29 Aprily sy ny 30 Avrily kosa ho an’Ambositra sy Antsirabe. Ao Antsirabe no hanaovana ny famaranana avy amin’ny faritra Atsimo ny 01 Mey. Halaviran-dalana mirefy 4 km no hifaninanan’ireo mpandray anjara ary mitentina Ar 2 tapitrisa no loka goavana ho an’ny mahazo ny fandresena.